काठमाडाैं, ३० असार । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वचन/कर्मले सीमा नाघेकाे बताएका छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले ‘नक्कली अयोध्या’ खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको बताएपछि नेता भट्टराईले यस्ताे टिप्पणी गरेका हाेन ।
डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीका वचन र कर्मले सीमा नाघेको बताउँदै अब उनलाई छाडा छोड्नु खतरनाक हुने टिप्पणी गरेका छन । संसदमा ‘सिंहमेव जयते’र बेसार-पुराणदेखि अयोध्या-पुराणसम्म आउँदा प्रधानमन्त्रीका चिन्तनप्रणाली स्वस्थ नदेखिएको पनि नेता भट्टराईले बताएका छन ।
समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा नेता भट्टराई लेख्छन – ‘अति गरे खति हुन्छ भन्छन् ! प्रधानमन्त्री ओलीका वचन/कर्मले सीमा नाघ्दैछन् ! संसदमा ‘सिंहमेव जयते’र बेसार-पुराणदेखि अयोध्या-पुराणसम्म आउँदा वहाँको चिन्तनप्रणाली स्वस्थ देखिन्न। संसद स्थगन गरेर अध्यादेश /संकटकालको ‘खड्ग’ समेत वहाँको हातमा छ ! अब वहाँलाई छाडा छोड्नु खतरनाक हुनेछ ! उपचार खोजौं !’
One thought on “अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई छाडा छोड्नु खतरनाक हुनेछ, उपचार खोजौं : डा.भट्टराई”
Pingback: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले भारतमा चर्को आलोचना